Haya’dda Qatar Charity oo qayb cusub ku kordhisay Isbitalka Dayniile – Banaadir weyne
Muqdisho (SONNA) – Munaasabad kooban ooo xariga looga jaray xarunta cusub ee hooyada iyo Dhallaanka oo lagu kordhiyay isbitalka Dayniile ee Muqdisho waxaa ka qeybgalay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Mawro Fowsiyo Abiikar Nuur, madaxda Hay’adda Qatar Charity xafiiskeeda Soomaaliya oo kaalin ka qaadatay hirgelinta iyo qalabaynta xaruntaasi,
Guddoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar iyo xubno kale, kuwaasi oo ku ammaanay Hay’adda Qatar Charity sida ay u garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed goor kasta. Mas’uuliyiintaan ayaa si wada jir ah u kormeeray qaybaha xaruntaasi ay ka kooban tahay,iyagoo u kuurgalay habka loo qalabeeyay iyo dhismaheeda iyo in ay dabooli karto baahiyaha bukaanada. Wasiirka caafimaadka ayaa maamulka isbitalkaasi ka dhagaystay warbixin ku saabsan qaabka loo qalabeeyay xaruntaan iyo sida ay bukaanada baahiyohooda u dabooli karto.
“Maanta waxaa farxadweyn inoo ah in aan furno xarunta Hooyada iyo Dhalaanka ee Isbitalka Dayniile, xaruntan waxaa ay ka kooban tahay 11 qol oo dhamaan loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka iyo farmashiiye leh, qaybtii Shaybaarka. Xaruntaan waxaa dhistay oo maalgalisay Qatar Charity, waxaana howsha socodsiinaysa Hay’adda back.” ayuu yiri Cabdi Nuur Xaaji Cali
Wasiirka Caafimaadka XFS Marwo Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa bogaadiysay howlaha lagu garab istaagayo dadka danyarta ah, iyadoo ka wasaarada ahaan sheegtay in dowrkooda ay ka qaadanayaan sidii loo daabooli lahaa baahiyaha caafimaad ee bulshada.
“Hay’adda Qatar Charity wax badan ayay dalka ka qabatay, ma ahan oo kaliya xaruntaan, waan u mahadcelinaynaa, xaruntan hooyada iyo dhalaanka waa waxyaabaha wadanka uu u baahanyahay, meelaha dalka uu ka nugulyahay waa Hooyada iyo Dhallaanka, anaga waxaan ku dadaalaynaa wax allaale wixii karaankeeni ah in aan raadino” ayay tiri Wasiirka Caafimaadka XFS Marwo Fowsiyo Abiikar Nuur.